ရိုးရိုးသာကူနဲ့ တူတူပါပဲ၊ ကန်စွန်းဥ(သို့) အာလူးပါတာကလွှဲရင်.. ပြီတော့ သူက ပိုချိုတယ်.. ကိုယ်လည်း လုပ်စားကြည့်လေ.. 🙂
နန်းနွယ် ချယ်ရီ says:
သာကူ အစိမ်းရောင် အထုပ်ကို သုံးထားလို့ပါ။ တခြားဘာမှ ထပ်မထည့်ထားပါဘူး မမြတ်။ ဟုတ်ကဲ့ ထမနဲလုပ်နည်းတင်ပေးလိုက် ပါမယ်.. 😀
မရေ သက်ြန်ကျရင် လုပ်စားကြည့်နော်.. 😀
It’s look nicer than regular 🙂
သာကူအစိမ်းရောင်ထုပ်ကို သုံးထားလို့ပါ။ သာကူ အစိမ်းရောင်လေးနဲ့ဆိုတော့ ပိုလှသွားတယ်။ City Mart မှာဝယ်လို့ရပါတယ် sis 🙂
သာကူအစိမ်းရောင်ထုပ်လေးနဲ့ လုပ်ထားတာပါ.. 😛
သာကူ အစိမ်းရောင်ထုပ်လေးနဲ့ လုပ်ထားတာပါ ညီမ။ တခြားဘာမှ မထည့်ထားပါဘူး။ သာကူ အစိမ်းရောင်ထုပ်လေးတွေ City Mart မှာဝယ်လို့ရပါတယ်… 🙂
ကျေးဇူးပါ မခင်ယမုံ.. 😀
Thanks for it ! 😀
a ma . yay .. thank Q .. shan mont nyin chin lote nee lay tin pya pay par oom naw .. arr pay nay par tal 🙂
ok I will sis ! 😛
သာကူစေ့များ ရပြီဆိုလျှင် ပြုတ်ထားတဲ့ အာလူးနဲ့ အုန်းနို့ကို ထည့်ရမှာပါ.. 😛
[…] ပသျှူးသာကူ […]
Wutyee Food House » သင်္ကြန် မုန့်လုပ်နည်း ၁၅မျိုး says:
အမ ရိုးရိုး သာကူကျို နည်းလေးပြောပြပေးပါ…
ရိုးရိုးသာကူကျိုချင်ရင် ပသျှူသာကူထက် သကြားကို လျှော့ထည့်ပြီ ချက်ရုံပါပဲ။ ချက်နည်းက တူတူပါပဲ..
ညီမ လေး။အဲဒီမှာအ ရာင် ကိုဘာသုံးရလဲ။ကျေးဇူးပါ ။
I will try to post this recipe soon sis 🙂
အစ်မရဲ့ post တွေထဲက အချက်အလက်တွေကို ကျွန်တော် apk ရေးချင်ပါတယ်…
အားပေးချင်တဲ့ သဘောကို ဦးတည်ပါတယ်
ရေးပြီး အစ်မဆီမှာပဲ apk download link ပြန်တင်ပေးပါမယ်…
လူကြိုက်များတဲ့ ချက်ပြုတ်နည်း post link လေးကို reply လုပ်ပေးစေလိုပါတယ်…
Bro ရေ Wutyee Food House ဟင်းချက် Mobile App က ၀တ်ရည် ကိုယ်တိုင်ထုတ်ဖို့ ရှိပါတယ်။ အခမဲ့ဖြန့်ဝေပေးဖို့ပဲ ရည်ရွယ်ထားတာပါ။ ဒါကြောင့် apk တော့ တခြားသူကို မထုတ်စေချင်ပါဘူး။ အဲဒီအတွက် နားလည်ပေးပါနော် bro.. 🙂
အမ​ရေ စာအုပ်​​တွေကို download ဆွဲလို့မရဘူးလားဟင်